Senator Bernie Sanders oo ka mid ah musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga ee k u loolamaya doorashada isreereebka xisbiga ayaa ku guuleystay codeyntii shalay ka dhacday gobolka Nevada, isaga oo haatan hogaanka u qabtay musharaxiinta kale ee la baratameysa.
Codbixinta Gobolka Nevada ayaa ahayd tartankii saddexaad ee murashaxiinta madaxtinimada xisbiga Dimoqraadiga ee ku guda jira soo xulashada musharaxii la tartami lahaa madaxweyne Donald Trump oo ka tirsan xisbiga Jamhruuiga. Labada gobol ee ka horreeyey Nevada ayaa kala ah Iowa oo dhaca bartamaha gobollada dhaca galbeedka Mareykanka iyo New Hampshire oo ah gobol dhaca dhanka waqooyi bari.
Sida uu ku waramayo wariyaha VOA Mike O’Sullivan waa tartankii u horreeyey ee gobol ay ku nool yihiin qowmiyado kala duwan ka hor codbixinno muhiim ah oo dhici doona todobaadyada soo socda. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa soo koobaya.